Git Sangit News » “फेरिपनि कुलमानलाई नै दोहोर्याउछौ”: मन्त्री बर्षमान पुन !
“फेरिपनि कुलमानलाई नै दोहोर्याउछौ”: मन्त्री बर्षमान पुन !
भदौ २९ अघि नै मन्त्रालयका तर्फबाट उहाँलाई दोश्रो कार्यकालका लागि नियुक्ती गर्नका लागि प्रस्ताव जाँदैछ । त्यो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि उहाँ दोश्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुनुहुनेछ । उहाँको कार्यकाल अझै केही दिन बाँकी नै छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतको नियमित आपुर्ति गराएर देशभर लोडसेडिङ मुक्त बनाएको भने वर्तमान सरकारले हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यकाल मा केही राम्रा कामहरुको थालनी भएको छ भने केही प्रश्नहरु उनीमाथि समेत तेर्सिएका छन् । घिसिङको कार्यशैलीलाई लिएर कतिपय विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाएको यसअघि सार्वजनिक भईसकेको छ ।
प्रकाशित मिति १४ भाद्र २०७७, आईतवार १५:५८